In the past, the building systems were run mostly standalone. Each system works by itself and communicates in its own language. Nowadays, systems have the capabilities to talk to each other and are able to speakacommon language. It is very beneficial to our human beings that we can monitor and control all of the systems in one place and are able to work effortlessly. Each system comes with its own set of behavior, and the systems integrator comes into play to integrate them intoasingle piece of technology. The word "automation" is interchangeably used instead of integration in the world of systems integration. With the aid of technology, the systems seem to be fully automated and it works by itself.
We, BOH, are here to help you with either standalone systems or control these systems, and or complete systems integration services for your needs. Standalone systems that BOH can take care of are Audio Visual Solutions and Building ELV Solutions, and the various types of control solutions.
အတိတ်ကာလများဆီမှာတုံးက အဆောက်အဦးတွေမှာ တပ်တဲ့ စနစ်တွေဟာ အများအားဖြင့် တစ်ခုချင်း အလုပ်လုပ်ကြတာ များပါတယ်။ စနစ်တစ်ခုချင်းစီ သူ့ဖာသာသူ အလုပ်လုပ် သူ့ဘာသာစကားနဲ့သူ ဆက်သွယ် လုပ်ဆောင်ကြတာပါ။ ခုခေတ်မှာတော့ စနစ်တွေဟာ တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု ဘုံဘာသာစကားကို အသုံးပြုပြီး ဆက်သွယ်လုပ်ဆောင်လာနိုင်ကြပါပြီ။ ဒါဟာ လူသားတွေအတွက် အင်မတန် အကျိုးများပါတယ်။ စနစ်တွေကို တစ်နေရာတည်းကနေ စောင့်ကြည့် ထိန်းချုပ်ပြီး အားအင်စိုက်ထုတ်ရမှု အနည်းဆုံးနဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်စေပါတယ်။ စနစ် တစ်ခုချင်းစီဟာ သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် အမူအကျင့်များနဲ့ လာကြတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် SI တွေက ဒီနေရာမှာ တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု ချိတ်ဆက်ပေးတဲ့ အလုပ်ကို လုပ်ဆောင်ကြရပါတယ်။ စနစ်ပေါင်းများစွာကို နည်းပညာအကူအညီနဲ့ စနစ် တစ်ခုတည်းသဖွယ်လုပ်ဆောင်နိုင်အောင် တည်ဆောက်ပေးကြရပါတယ်။ စနစ်များ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်စေခြင်း လောကတွင်းမှာ အလိုလျောက်ဖြစ်ခြင်း ဆိုတဲ့ စကားလုံး အသုံးများပါတယ်။ နည်းပညာ အကူအညီနဲ့ စနစ်များကို ရာနှုံးပြည့် အလိုလျောက် အလုပ်လုပ်စေရေး ဆောင်ရွက်ကြရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ Team BOH အနေဖြင့် စနစ် တစ်ခုချင်း ဖြစ်စေ၊ တပ်ဆင်ပြီး စနစ်များအား ထိန်းချုပ်စီမံခြင်း ဖြစ်စေ၊ Systems Integration စနစ် တစ်ခုလုံး ဖြစ်စေ ကူညီ ဖော်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ရုပ်သံ စနစ်များ နဲ့ အဆောက်အဦးဆိုင်ရာ စနစ်များကို တစ်ခုချင်း စနစ်များအဖြစ် BOH က ဖော်ဆောင်တပ်ဆင်ပေးနိုင်ပြီး မတူသော ထိန်းချုပ်စနစ်များကိုလည်း ပုံစံပြု ဖော်ဆောင် တပ်ဆင်ပေးနိုင်ပါတယ်။